ရီးယဲလ်နည်းပြသစ် ကွန်တီဖြစ်လာရင် ဘယ်ကစားသမားတွေ ရောက်လာမလဲ
ရီးယဲလ်နည်းပြသစ် ဖြစ်လာရင် ကွန်တီ Antonio Conte ခေါ်ယူဖို့ ရှိနေတဲ့ ကစားသမားများ
29 Oct 2018 . 5:54 PM
ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့က အဓိက ပြိုင်ဘက် ဘာစီလိုနာကို (၅-၁)ဂိုးနဲ့ အရှက်တကွဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် နည်းပြလိုပယ်တက်ဂီ Julen Lopetegui ရဲ့ အနာဂတ်က အဆုံးသတ်ဖို့ ပိုနီးစပ်လာပါပြီ။ ဒီနေ့ (တနင်္လာ)မှာပဲ ရီးယဲလ်အသင်း ဘုတ်အဖွဲ့ဟာ လိုပယ်တက်ဂီကို ရာထူးက ထုတ်ပယ်ပြီး ချယ်လ်ဆီးနည်းပြဟောင်း ကွန်တီ Antonio Conte ကို နည်းပြသစ်ခန့်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်နေတယ်။ အခြေအနေတွေအရလည်း ရီးယဲလ်နည်းပြဖြစ်ဖို့ ကွန်တီဟာ ရာခိုင်နှုန်းများနေပါပြီ။ တကယ်လို့ ရီးယဲလ်နည်းပြသစ်အဖြစ် ကွန်တီသာ ခန့်အပ်ခံခဲ့ရရင် ဘယ်သူတွေကို ခေါ်ယူအားဖြည့်မလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းကြည့်လိုက်ရအောင် . . . .
အီကာဒီ Mauro Icardi (အင်တာမီလန်)
ရီးယဲလ်အသင်းဟာ တိုက်စစ်မှာ ရုန်းကန်နေရတဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဘန်ဇီမာ Karim Benzema နေရာကို ထိပ်တန်းအဆင့် ကစားသမားတစ်ဦးနဲ့ အစားထိုးဖို့ အရင်ကတည်းက ပြင်ဆင်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီအတွက် အီကာဒီကို ပစ်မှတ်ထားနေတယ်ဆိုတဲ့ ခန့်မှန်းသတင်းတွေကလည်း အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက် စပြီဆိုရင် အမြဲတမ်း ထွက်ပေါ်လေ့ရှိတယ်။ ကွန်တီအနေနဲ့ ရီးယဲလ်နည်းပြရာထူးကို လက်ခံခဲ့ရင် အီကာဒီကို မဖြစ်မနေခေါ်ယူဖို့ တာဝန်ရှိသူတွေကို တောင်းဆိုမယ့်အနေအထားပါပဲ။
မားကို့စ်အလွန်ဆို Marcos Alonso (ချယ်လ်ဆီး)
ဒါကတော့ ထူးထူးခြားခြား ပြောစရာမလိုပါဘူး။ မားကို့စ်အလွန်ဆိုကို ချယ်လ်ဆီးအသင်းဆီ ရောက်အောင် ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ကွန်တီဟာ ရီးယဲလ်အသင်းနည်းပြဖြစ်လာရင် သူနဲ့အတွဲညီခဲ့တဲ့ မားကို့စ်အလွန်ဆိုကို မရရအောင် ခေါ်ဦးမှာပါပဲ။ အခု ဘယ်နောက်ခံလူ မာဆယ်လို Marcelo ကလည်း ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းနဲ့ အသံတွေထွက်နေတာကြောင့် တကယ်လို့ သူ့ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရရင် ဘယ်သူနဲ့အစားထိုးမလဲဆိုတာ ရီးယဲလ်အသင်း ကြိုပြင်ဆင်နေလောက်ပါပြီ။ မားကို့စ်အလွန်ဆိုကလည်း ရီးယဲလ်အသင်းမှာ ကွန်တီနဲ့ လက်တွဲဖို့ ဆန္ဒရှိနေမှာပါ။
နေမာ Neymar (PSG)
နေမာနဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းတို့ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ပုံပြင်က ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတည်းက ထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ PSG အသင်းကလည်း သူတို့ရဲ့ အဓိက ကစားသမားကို လက်လွှတ်မခံလိုဘဲ မတန်တဆ ကြေးရမှသာ ရောင်းချမယ့်အနေအထားကြောင့် ရီးယဲလ် အခက်တွေ့နိုင်တယ်။
ဟာဇက် Hazard (ချယ်လ်ဆီး)
ရီးယဲလ်အသင်းအတွက် နံပါတ်(၁)ပစ်မှတ်ပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ကတည်းက ရီးယဲလ်ကို ဟာဇက် ပြောင်းရွှေ့ဖို့ နီးစပ်ခဲ့ပြီး အပြောင်းအရွှေ့ မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဟာဇက်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ရီးယဲလ်ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဆန္ဒရှိနေတာကြောင့် လာမယ့်ဇန်န၀ါရီ ဒါမှမဟုတ် လာမယ့်နှစ်၊ နွေရာသီကျရင် ဟာဇက်ရဲ့ ရီးယဲလ်အိပ်မက်တွေက အမှန်တကယ်ဖြစ်လာဖို့ ရှိနေတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ .. လက်ရှိ ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့အနေအထားအရ ကစားသမားသစ် မဖြစ်မနေ ခေါ်ယူအားဖြည့်ရမှာပါ။ ဒီကစားသမားတွေက ရီးယဲလ်အသင်းအတွက် တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ ကစားသမားတွေဖြစ်လို့ ကွန်တီသာ နည်းပြဖြစ်လာရင် ဘယ်သူတွေ ရီးယဲလ်ရောက်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတော့တယ် . .
Photo:Getty Images,Boston Herald,Sportsnet,Evening Standard
ရီးယဲလျနညျးပွသဈ ဖွဈလာရငျ ကှနျတီ Antonio Conte ချေါယူဖို့ ရှိနတေဲ့ ကစားသမားမြား
ရီးယဲလျအသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့တနင်ျဂနှနေကေ့ အဓိက ပွိုငျဘကျ ဘာစီလိုနာကို (၅-၁)ဂိုးနဲ့ အရှကျတကှဲ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ နညျးပွလိုပယျတကျဂီ Julen Lopetegui ရဲ့ အနာဂတျက အဆုံးသတျဖို့ ပိုနီးစပျလာပါပွီ။ ဒီနေ့ (တနင်ျလာ)မှာပဲ ရီးယဲလျအသငျး ဘုတျအဖှဲ့ဟာ လိုပယျတကျဂီကို ရာထူးက ထုတျပယျပွီး ခယျြလျဆီးနညျးပွဟောငျး ကှနျတီ Antonio Conte ကို နညျးပွသဈခနျ့တော့မယျဆိုတဲ့ သတငျးတှလေညျး ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ထှကျပျေါနတေယျ။ အခွအေနတှေအေရလညျး ရီးယဲလျနညျးပွဖွဈဖို့ ကှနျတီဟာ ရာခိုငျနှုနျးမြားနပေါပွီ။ တကယျလို့ ရီးယဲလျနညျးပွသဈအဖွဈ ကှနျတီသာ ခနျ့အပျခံခဲ့ရရငျ ဘယျသူတှကေို ချေါယူအားဖွညျ့မလဲဆိုတာ ခနျ့မှနျးကွညျ့လိုကျရအောငျ . . . .
အီကာဒီ Mauro Icardi (အငျတာမီလနျ)
ရီးယဲလျအသငျးဟာ တိုကျစဈမှာ ရုနျးကနျနရေတဲ့ တိုကျစဈမှူး ဘနျဇီမာ Karim Benzema နရောကို ထိပျတနျးအဆငျ့ ကစားသမားတဈဦးနဲ့ အစားထိုးဖို့ အရငျကတညျးက ပွငျဆငျခဲ့တာပါ။ အဲဒီအတှကျ အီကာဒီကို ပဈမှတျထားနတေယျဆိုတဲ့ ခနျ့မှနျးသတငျးတှကေလညျး အပွောငျးအရှဈေ့ေးကှကျ စပွီဆိုရငျ အမွဲတမျး ထှကျပျေါလရှေိ့တယျ။ ကှနျတီအနနေဲ့ ရီးယဲလျနညျးပွရာထူးကို လကျခံခဲ့ရငျ အီကာဒီကို မဖွဈမနခေျေါယူဖို့ တာဝနျရှိသူတှကေို တောငျးဆိုမယျ့အနအေထားပါပဲ။
မားကို့ဈအလှနျဆို Marcos Alonso (ခယျြလျဆီး)
ဒါကတော့ ထူးထူးခွားခွား ပွောစရာမလိုပါဘူး။ မားကို့ဈအလှနျဆိုကို ခယျြလျဆီးအသငျးဆီ ရောကျအောငျ ချေါယူခဲ့တဲ့ ကှနျတီဟာ ရီးယဲလျအသငျးနညျးပွဖွဈလာရငျ သူနဲ့အတှဲညီခဲ့တဲ့ မားကို့ဈအလှနျဆိုကို မရရအောငျ ချေါဦးမှာပါပဲ။ အခု ဘယျနောကျခံလူ မာဆယျလို Marcelo ကလညျး ဂြူဗငျတပျဈအသငျးနဲ့ အသံတှထှေကျနတောကွောငျ့ တကယျလို့ သူ့ကို ဆုံးရှုံးလိုကျရရငျ ဘယျသူနဲ့အစားထိုးမလဲဆိုတာ ရီးယဲလျအသငျး ကွိုပွငျဆငျနလေောကျပါပွီ။ မားကို့ဈအလှနျဆိုကလညျး ရီးယဲလျအသငျးမှာ ကှနျတီနဲ့ လကျတှဲဖို့ ဆန်ဒရှိနမှောပါ။
နမော Neymar (PSG)
နမောနဲ့ ရီးယဲလျအသငျးတို့ရဲ့ အပွောငျးအရှပေုံ့ပွငျက ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီကတညျးက ထှကျပျေါခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ PSG အသငျးကလညျး သူတို့ရဲ့ အဓိက ကစားသမားကို လကျလှတျမခံလိုဘဲ မတနျတဆ ကွေးရမှသာ ရောငျးခမြယျ့အနအေထားကွောငျ့ ရီးယဲလျ အခကျတှနေို့ငျတယျ။
ဟာဇကျ Hazard (ခယျြလျဆီး)
ရီးယဲလျအသငျးအတှကျ နံပါတျ(၁)ပဈမှတျပါပဲ။ ပွီးခဲ့တဲ့နှရောသီ အပွောငျးအရှကေ့တညျးက ရီးယဲလျကို ဟာဇကျ ပွောငျးရှဖေို့ နီးစပျခဲ့ပွီး အပွောငျးအရှေ့ မဖွဈခဲ့ဘူး။ ဟာဇကျကိုယျတိုငျကလညျး ရီးယဲလျကို ပွောငျးရှဖေို့ ဆန်ဒရှိနတောကွောငျ့ လာမယျ့ဇနျနဝါရီ ဒါမှမဟုတျ လာမယျ့နှဈ၊ နှရောသီကရြငျ ဟာဇကျရဲ့ ရီးယဲလျအိပျမကျတှကေ အမှနျတကယျဖွဈလာဖို့ ရှိနတေယျ။
ပရိသတျကွီးရေ .. လကျရှိ ရီးယဲလျအသငျးရဲ့အနအေထားအရ ကစားသမားသဈ မဖွဈမနေ ချေါယူအားဖွညျ့ရမှာပါ။ ဒီကစားသမားတှကေ ရီးယဲလျအသငျးအတှကျ တကယျလိုအပျနတေဲ့ ကစားသမားတှဖွေဈလို့ ကှနျတီသာ နညျးပွဖွဈလာရငျ ဘယျသူတှေ ရီးယဲလျရောကျမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာကောငျးနပေါတော့တယျ . .